विल्सन बोल्डविजिनसँग टेलिफोन कुराकानी डी डेग्राग्राफबाट: साजिश सिद्धान्तमा: मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	22 मई 2019 मा	• 18 टिप्पणिहरु
हिजो दिउँसो मेरो टेलिग्राफको विल्सन बोल्डविजिनसँग साईकलपस सिद्धान्तमा एक श्रृंखलामा भाग लिने क्रममा एक टेलिफोन कुराकानी थियो। मेरो ई-मेल प्रतिक्रियामा मैले रिपोर्ट गरे कि मलाई साजिश सिद्धान्तहरूमा विश्वास छैन। उनले सोचेका छन् कि एक उल्लेखनीय प्रतिक्रिया हुन सक्छ, त्यसैले मैले केहि बुझाई दिनको लागि तिनलाई फोन गर्न सहमत छु। उनले पनि व्याख्या गर्नेछन् कि उनले मलाई साक्षात्कार गर्न चाहन्थे र यस्तो साक्षात्कारको विषय र दृष्टिकोण कस्तो हुनेछ।
हाम्रो कुराकानीमा, जुन म छोटो रूपमा सबै खुल्लापनको लागि प्रकाशित गर्दछु, विल्सनले छाप दिन्छ कि यो शुद्ध व्यक्तिगत रुचि छ कि उसले मलाई सम्पर्क गर्यो। चासो उठेको छ किनकि उनले आफ्नो सीरीजको सन्दर्भमा मेरो वेबसाइट पछ्याउँदै सुरू गरे। तैपनि हाम्रो कुराकानीको अन्तमा उहाँ स्वीकार्नुहुन्छ कि स्पष्ट रूपमा एक बजार हो कि उसले ट्याप गर्नु पर्छ। यसैले यो देखिन्छ कि ऊ रिसाको बन्द गर्न अधिक वा कम निर्देशन दिइएको छ; मेरो महत्वपूर्ण लेखहरूमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको बढ्दो समूहबाट रिसाक।
विल्सन चुपचाप स्वीकार्छन् कि पत्रकारहरू पहिले नै उनीहरूको शिक्षाबाट पूर्वाग्रहित छन् र यो पनि विश्वास गर्छन् कि नकली समाचारहरू मात्र रूसबाट आउँदैन, तर त्यहाँबाट पनि आउन सक्छ। उनले कुराकानीमा पनि स्पष्ट रूपमा बताए कि रूसको उनको छवि ठुलो युद्धको आत्माले पाएको थियो जसमा उहाँले ठूलो हुनुभयो। उहाँ पनि रिपोर्ट गर्दछ कि उहाँ धेरै समर्थक अमेरिकाको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले उनी त्यो देशलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तथापि, उनले निश्चित रूपमा डच मिडियाको भूमिका प्रचारप्रसारको रूपमा अस्वीकार गर्छन्, तर स्वीकार गर्दछन् कि जुनसुकै मिडियामा पूर्णतया निर्भर व्यक्तिको लागि धेरै असाधारण हुन्छ। मलाई लाग्छ कि विल्सन विशेषतः पत्रकारिता शिक्षा र उनको बदलिएको विश्वव्यापी रूपमा उनको आलोचनामा महत्वपूर्ण छ, किनभने उनी राम्ररी सजग छन् (किनभने मैले यो गेल बेलेको सम्बन्धमा इमेलको उल्लेख गरेको छु, तल हेर्नुहोस्) कि मैले टेलिभिजन वार्तालाप रेकर्ड गर्छु र उनी रेकर्ड गर्न मन पराउँछु। सँधै बढ्दो महत्त्वपूर्ण (सुन्नि-इन) समूहको साथ सानो क्रेडिट जित्न चाहन्छ। राम्रो हुन सक्छ कि मुख्यधारा मिडिया पत्रकारिताको रूपमा तपाईंले प्रभाव दिन सक्नुहुनेछ कि तपाईंले सबका लागि लिनु भएको छैन। यद्यपि त्यसोभएको भ्रम सिर्जना गर्दछ जुन महत्वपूर्ण पत्रकारहरू अझै पनि अवस्थित छन्।
निस्सन्देह, आफ्नो रोजगार सम्झौता अन्तर्गत विल्सनले कहिल्यै स्वीकार गर्दैन कि मिडियाले मानिसहरूको भावनालाई प्रभाव पार्छ। त्यसकारण उहाँले यसलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ (जसले मलाई सोचेको छ - अनि आवश्यक छ - मोडिदिन्छ) आजका राजनीतिज्ञहरूलाई प्रमुख घटनाका क्रममा उत्पन्न हुने भावनाको जवाफ दिन्छन्। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ कि उहाँले हेलमू कोहल जस्तो राजनीतिज्ञहरूको दिनसम्म फिर्ता लिनुहुन्छ; पुरानो शान्त र सजिलो राजनीतिज्ञहरूले बढी जानकारी दिएका छनौट गरे। यदि विल्सनले स्वीकार गर्यो कि सरकारहरू, न्यायपालिका र मिडियाबीचको सहयोग थियो, त्यो भोलि भोलि भोलि फाल्नेछ। उहाँले संकेत गर्न प्रयास गर्दछ कि एक को लागि एक उच्च टोपी हुँदैन, उदाहरणका लागि, ओएम कर्मचारीहरू, किनभने उहाँले तिनीहरूलाई नजिक अनुभव गरेको छ (जसको म अधिक जान्न चाहन्छु)। उनले यसो भने कि PsyOps (मनोवैज्ञानिक संचालन) धेरै धेरै मानिसहरूलाई धेरै ज्ञान चाहिन्छ। मेरो आलोचना यो हो कि यो आवश्यक छैन, किनभने फाईलहरू यति कम्पाइजलाइज हो कि प्रत्येक फारामहरू केवल एक सानो रडार मात्र र केवल शीर्ष मुख्य रेखाहरू प्रबन्ध गर्दछ। यहाँ पनि मलाई विश्वास छ कि यो आफ्नो क्यारियर को लागि यो स्वीकार गर्न विनाशकारी हुनेछ।
विल्सन बेशक साँच्चै जान्छ कि मेरो वेबसाइटमा मैले प्रायः नियन्त्रण नियन्त्रणको बारेमा बोलेको छु। अन्तमा, उहाँ गोपनीय रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ कि उनीहरूले महत्त्वपूर्ण विचारकहरूको बढ्दो बजारमा ट्याप गर्नु पर्छ। मेरो भावना भन्छ कि मलाई बोर्डमा सुक्नु पर्छ। सन्दर्भमा यदि तपाईंले 'सामेल हुन सक्नुहुन्न' em। कुराकानीको सुरुवातमा तपाईले मलाई सुन्नु हुनेछ 2015 बाट Giel Beelen को प्रयासमा मलाई टर्किक जेडद्वारा एनओएस स्टूडियो छाप्ने लिंक लिने प्रयास गर्नुहोस्। मेरो विचारमा मलाई एक दृश्य मार्फत अन्त्य गर्ने एउटा अन्त्य प्रयास थियो। त्यस स्टुडियोमा छापिएको र मार्टिन व्रिजल्याण्डसँग लिङ्क गर्न गील बेलेनको प्रतिबद्धता। त्यो असफल भयो। मैले विलसनलाई मेरो उत्तर ईमेलमा उल्लेख गरें।
तपाईंलाई थाहा हुन सक्छ मलाई टेलिक जेडको मामला (एनओएस स्टूडियो, 2015) को बिरुद्ध सम्बन्धी एक साक्षात्कार को लागि एक पटक गिइल बेले द्वारा भनिन्छ। उहाँले मलाई प्रसारणमा बाँच्नु भएको समय मलाई भन्नुभयो, तर यो बन्द भएन। वास्तविक प्रसारणमा, जुन एक घण्टा पछि पछि लागेका थिए, मेरो जवाफहरू घटाइयो, त्यसैले मैले वास्तवमा के भन्नुभएको थियो कि एक फरक तस्वीर देखा पर्यो। दुर्भाग्यवश गीलका लागि, मैले फोनलाई आफैलाई फोन गरेको थिएँ। मैले YouTube मा रेकर्डिङ प्रकाशित गरें। तथापि: चूंकि Giel ले मेरो YouTube च्यानल माध्यम सम्म पुग्न सक्नु भन्दा कम श्रोताहरू छन्, इमेजिङ पहिले नै गरेको छ (मेरो व्यक्ति को ह्रास गर्न)।
यद्यपि म तल वार्तालापमा म सहानुभूति र हल्का विल्सन बनेको छु, म एक पटक फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि "पुरानो साजिश सिद्धान्तहरू" जस्तै चन्द्रमा ल्यान्डिङ, जॉन एफ। केनेडी र जस्तै जस्ता श्रृंखलाहरू मुख्यतः उद्देश्यले डिब्बाबंद रूपमा निर्मित डिफाइनमेन्टबाट छुटकारा पाउनको लागि उद्देश्य हुन सक्छ। र केवल ती पुराना विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्नुहोस्। जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, यो समयको बारेमा हामी त्यही मिडियाको झूटा प्रचारप्रसारवादी भूमिकामा ध्यान केन्द्रित गर्दछौं (जसको लागि विल्सनले काम गर्छ) यहाँ र अहिले। आखिर, धेरै लामो समय सम्म यो वेबसाइट पछ्याउँदै पाठकलाई अझ बढी पत्ता लगाउन सक्षम भएको छ कि मिडिया वास्तवमा मनोवैज्ञानिक सञ्चालनको भाग हो र वैकल्पिक मिडियाका ठूला भागहरू नियन्त्रणमा छन्।
विल्सनले कुराकानीमा यसो भन्छ कि उहाँसँगको पहुँच गर्न हरेक स्वतन्त्रता हो; एक अपवाद संग। उनले मिका कटको बारेमा कुरा गर्दै र विल्लम ओल्टट्यान्सको दिशामा केहि परिवर्तन गरे (जो डच राज्यको क्षतिको दावी को सम्झना छ)। यो मतलब हुन सक्छ कि मलाई सही पट परिवार र Demmink फाइल को माध्यम ले डच राज्य को विष्फोट को बारे मा सबै समय भएको छ, तर तर अलग। यो पनि हुन सक्छ कि डे टेलिग्राफले त्यो डच राज्यको लाइन पछ्याएको हुन सक्छ (अन्यथा विल्सनले त्यो असाइनमेन्टलाई दिएको थिएन)।
म धेरै उत्सुक छु यदि म श्रृंखलामा भाग लिन निमन्त्रणा पाउनेछु र कुन तरिकामा केहि सम्पादन गर्ने छ। म बस विल्सन भरोसा गर्न सक्छु भने मात्र थाहा छैन। यो तथ्यमा निहित छ कि उहाँ आफ्नो जीवनमा मुख्यधारा मिडियामा निर्भर हुनुहुन्छ। तथापि सहानुभूतिपूर्ण, रणनीतिक र अनुष्ठान विल्सन लगाउन सक्छ; तथापि राम्रो लाग्यो म कल्पना गर्न सक्छु कि त्यो एक राम्रो भुक्तानी साक्षात्कारकर्ता र धारणा प्रबन्धक हो; म त्यो पुरानो भन्नुको बारेमा सोच्दैछु "कसको रोटीले आफ्नो शब्द खाएको छ बोल्छ"। र ईमानदार हुनुहोस्: यदि तपाईंलाई गहिरो थाहा छ कि तपाइँ एक भारी भुक्तान गर्ने प्रचारक हुनुहुन्छ, जो अधिक देखि अधिक पुलिस प्रचार प्रसार रणनीतिहरु को माध्यम ले समाज को स्टीयरिंग को योगदान दि्छ र यसैले पनि तपाईंको जेबहरु लाई एकदम भर दि्छ, तपाईं वास्तव मा तपाईंको टाउकोमा मक्खनको एक सभ्य टुक्रा। म वास्तवमा विल्सन (र तिनका धेरै सहकर्मीहरू) जस्तै व्यक्तिको बारेमा चिन्तित हुन सक्दिन। यो भरा भरी बैंक खाता र माथिको कभरको निश्चितता संग मजा छ।
माफी मार्फत Bukman व्यवस्थापन यस ध्वनि रेकर्डिङको साथ फोटो प्रयोग गर्नको लागी। मैले दृष्टान्तको लागि राम्रो तस्विर पत्ता लगाउन सकेन र आशा गर्दछु कि तपाईंले यूहन्ना डे मोल को अफगानिस्तान-अनुमति पद्धतिको रूपमा दावी पठाउनुभएन।
नियन्त्रक माध्यमिक माध्यमका अधिक प्रमाणका साक्षीहरू जसले मानेसर व्रिजल्याण्ड (नाओमी हग्वेवेजिज) आक्रमण गरे।
ट्याग: मलाई, बोल्ड वाइन, साजिश, साजिश सिद्धान्तहरू, विशेष, साक्षात्कार, JFK, चन्द्रमा ल्यान्डिङ, मार्टिन, नेभेलेस, Serie, टेलिग्राफ, वैन, नि: शुल्क देश, विल्सन
22 मई 2019 मा 07: 21
तिनीहरू सँगसँगै जानु पर्छ, त्यहाँ धेरै धेरै मानिसहरू जागिर र नीदरल्याण्डको समाचार पछाडि रहन सक्दैनन्।
आफैलाई एक वा अन्य साजिश श्रृंखलामा धकेल्नु नबिर्सनुहोस्। आजकल यो वास्तविक पागल मान्छे जोडात्मक विषयहरू मार्न सजिलो छ। तिनीहरू पक्कै पनि राम्रो छन्।
वैसे, तपाईंको बोर्डमा कहीं कोण गर्नको लागि उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ
साथै एक राम्रो चिन्ह, तिनीहरू भान्सा सुरु गर्न शुरू गर्दै छन्।
22 मई 2019 मा 10: 40
विल्सनले मेरो प्रकाशनको लागि अत्यन्तै खुसीसाथ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ र सोच्दछ कि मैले यसलाई लिनु पर्छ। मलाई लाग्छ यो अचम्मको खुला कुराकानी हो। म शोर बुझ्न सकिनँ।
22 मई 2019 मा 11: 09
यसको साथ केहि गलत छैन, एक रोचक छलफल हो।
शायद तपाईं एक कदम अगाडि हुनु हुँदैन र खुला कार्ड खेल्न हुँदैन।
22 मई 2019 मा 16: 27
शायद श्री बोल्डवाज एफ एफ को साजिश को परिभाषा को देखो या बेहतर साजिश पनि को लागी चाहिए र डेल को गंजा मा नहीं
1: एक साथ संयोजक को कार्य
तिनीहरू आरोप लगाए वा हत्या गर्ने योजना बनाइयो।
2A: साजिशकों को बीच एक सम्झौता
सरकार विरुद्ध एक साजिशलाई हटाइयो
b: साजिशकर्ताहरूको एक समूह
एक साजिश अपरिचित वा अघोषित अभिव्यक्ति
दिनको हरेक मिनेट अनुसार लेन्छ, कार्टेल गठन राम्रोसँग सोच्नुहोस्
22 मई 2019 मा 19: 28
प्रिय विल्सन, तपाई सँगै पढ्नुहुन्छ
तपाईं at5 मा हुनुहुन्थ्यो, अठाईहरू अशक्त वर्षहरू थिए।
हामी चाँद को बारे मा कुरा गर्न नहीं जा रहयो किनकी यो हो होलोग्राम हो, यो पनि दावा गरेको छ कि हामी एक्लै गरौं यदि हामी एक चार पहिया कार संग कैप्सूल आफु भन्दा ठूलो थियो त्यहाँ त्यहाँ हुन सक्छ, हामी "यस बारे मा कुरा गर्न जाँदैछन" र, तपाईं फ्लैट पृथ्वीको बारेमा भने, यसले कुरा गर्दैन। यदि स्ट्यानली क्बिक्रले पोलेनबर्ग हाफ हाटालाई पनि फिल्मी गरे, त्यो जाँच गर्नुहोस्
रोब Scholte हमला, जो कि कथित तौर पर चिकित्सा हस्तक्षेप करना था, इसके बारे में, क्या हम जांच करने जा रहे हैं? त्यो मिकी हॉगेन्जेक एक खरिद छैन तर रोबी दुवैले आफ्नो खुट्टा गुमाए, यो कसरी गलत छ, मानिसहरूले सबैलाई निगल्यो !!! तपाईं AT5 मा हुनुहुन्छ, तिनीहरू सबै कुरा जान्छन् ...
अन्नास मामला वा वैट्रा मामला मा एक नजर राख्नुहोस् कि शायद यो पनि थाहा थियो कि यो एक psy विरोध थियो र विरूपण को रूप मा प्रयोग को रूप मा राम्रो तरिकाले
प्रिय विल्सन आउनुहोस्, हामी सडकमा जाँदैछौं, र होईन म "पनि" शब्दको रूपमा तपाईं टेलिभिजन कुराकानीमा इरादा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर पनि एक इमानदार पत्रकार बन्नु र वास्तवमा अन्वेषण सुरु गर्नुहोस्। हामी यस गर्मीको साथ हामीसँगै जाँदैछौं
विल्सन, आफैलाई आक्रमण (टेलिग्राफबाट पत्रकारहरू) को लागी हेर्ने हो, टेलिग्राफ इमारतको मतलब, हामी तपाईको साथमा लाग्छौं,
चार्ली हिब्रू जस्तै, एक पटक फेरि बलिदानको भूमिका खेल्न सक्ने नकली आक्रमण, हान्जी हान्नुहोस्, फर्केर फर्काउनुहोस्, तर हो कि तपाइँको सम्पादकले तपाईका अन्तर्वार्तालाई अर्डर भन्दा माथि राख्नु हुँदैन।
विल्सन, आओ, तपाईं एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो एक स्वर्गीय छैन त्यसैले तपाईले सबै वास्तविक पत्रकारहरू भन्नुहुन्छ भने आउनुहोस् ठीक छ विल्सन को जांच,
कुनै साजिश छैन> केवल पारदर्शी, ईमानदार, निष्कपट अनुसन्धान ताकि तपाईं आफ्नो वातावरण र आफ्नो परिवार संग स्पष्ट अन्तस्करण संग सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ ...
22 मई 2019 मा 19: 45
मलाई केही वर्ष अघि टिभि कार्यक्रमको सम्झना गर्दछ "उजुरी वा छैन?"
Boldewijn निश्चित रूपमा थाहा छ भन्दा बढी थाहा छ, उहाँले प्रश्नहरू पनि छोड्ने छ।
तर निस्सन्देह, पत्रकार र पत्रकारितामा उच्च स्थानहरू भएका व्यक्तिहरू मात्र झूटा छैनन् तर व्यावसायिक झूटाहरू, विवेक बिना, ठूलो अहंकार र आवश्यक एनएलपी ज्ञान।
22 मई 2019 मा 20: 30
विल्सन बोल्डविजन मार्टिन व्रिजल्याण्ड, डे स्टेन्ट मामला संग साक्षात्कार मा अजीब कुरा छ
बस साक्षात्कार सुन्नुहोस्, विल्सन यो एक अजीब चीज थाहा पाउँछ जुन भावनालाई तौलिएको छ र सबै क्यारियरिजहरूले एक जना भयानक दुर्घटनाको कारणले गर्दा मंत्री द्वारा जाँच गरेको थियो,
स्टन्टले यातायातको एक राम्रो तरिका हो, तर फेरि फेरि, यो सम्भव छ, जो पनि कारण हुन सक्छ
ठीक छ, हालको विल्सन, तपाइँ कसरी यस्तो बयान पाउनुभयो? यो भयानक छ कि चार केटाकेटी दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ, तपाईलाई अझ धेरै व्याख्या गर्नु हुन्छ र म भन्छु, कि साँच्चिकै अन्वेषण गरिनु पर्छ, म तपाईंको जवाफको बारे उत्सुक छु।
विलसनले सोचेका थिए कि यी सबै क्यारियरहरू अझै पनि खडा हुन थाल्छन्, राम्रोसँग त्यहाँ विल्सनको साजिशमा व्याख्या हुनुपर्छ, यो यहाँ बताउनुहोस् विल्सन, यो भयानक छ कि केवल चार छोराछोरी मारिएका छन्, मलाई लाग्छ कि एक अनुसन्धानको लायक छ जब सम्म विल्सन अन्य तर्कहरु संग आउँछ।
24 मई 2019 मा 00: 26
दिलचस्प कुराकानी। जो कोहीले सञ्चार माध्यमलाई आलोचना गर्दछ, उनीहरूले तीन-तारा भोजनको रूपमा सुरक्षित रूपमा धेरै संदिग्ध पदार्थको सेवा गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, एल्स बोर्स्टको हत्या। पहिलो स्वतन्त्रतामा, यो अस्पष्ट थियो कि उनी आफ्नो गेराजमा दुर्घटनामा मरेको वा मरेका थिए कि छैन। तपाईले सोच्न सक्नुहुनेछ, जबसम्म तपाईले पछि सुन्नुभयो कि त्यो 41 चाकू स्टिडिहरु संग मरेको थियो। त्यो साँच्चै आफ्नो क्रुच खेलमा गिरावट संग भ्रमित हुन सक्दैन, अखबार बस भन्नाले।
मिडिया लोकतान्त्रिक संवैधानिक राज्यको घडीमा हुनुपर्छ, तर तिनीहरू अहिले निश्चित छैनन्। संवेदनशील अवस्थाहरूमा आलोचनात्मक प्रश्न प्राय: सोचेको छैन, जस्तै एल्स बोर्स्टको हत्या।
यसैले वैकल्पिक मीडियालाई घडीको प्रकार्यको रूपमा कार्य गर्न मिडियालाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक पर्दछ। विल्सन बोल्डवाइजले सम्पर्क खोजिरहेको तथ्य तथ्यले संकेत गर्दछ कि केहि परिवर्तन हुँदैछ।
24 मई 2019 मा 00: 32
तथापि, यो पनि संकेत गर्न सक्छ कि तिनीहरू महत्वपूर्ण आवाज 'साजिश विचारकर्ताहरूको कोटी' मा घुम्न चाहन्छन् र देखाउन चाहन्छन् कि यी सिद्धान्तहरू सबै गलत धारणाहरूको पूर्ण छन्। यसबाहेक (मैले वार्तालापमा संकेत गरेको छु र मैले धेरै लेखहरूमा ठूलो रूपमा प्रमाणित गरेको छु), वैकल्पिक सञ्जालका ठूला भागहरू (यदि सबै होइन) विपक्षी नियन्त्रणमा छन्। मान्छेले मलाई 1 मा ती नियन्त्रण गरिएका वैकल्पिक मिडियासँग आकर्षित गर्न खोज्छ, तर निस्सन्देह म यो हुन दिँदैन।
24 मई 2019 मा 15: 07
त्यो साँच्चै सम्भव छ, यो कसरी हेर्नेछ कि उनी कसरी वितरित हुनेछन्। तर मलाई लाग्छ कि बोल्डविजनको दावी सही छ कि सम्पादकीय कोठामा यस प्रकारको विषयको बारेमा धेरै चर्चा छ। त्यहाँ पनि मानिसहरू एमएसएम मिडियासँग काम गरिरहेका हुनेछन् जुन वास्तवमा पत्रकारितामा संलग्न हुन चाहन्थे र मलाई लाग्छ कि उनीहरूले आफ्नो आवाज सुनेका छन्। तिनीहरू पनि देख्छन् कि लामो समयसम्म उनीहरूले अरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिने छैनन्। मानिसहरूको बढ्दो संख्याले मान्यता पाइरहेको छ कि बीआर नेदरल्याण्डको पीआर विभागको रूपमा मिडिया प्रकार्य र कानून र लोकतन्त्रको अभिभावकको रूपमा। तर त्यहाँ जाने लामो बाटो छ, त्यसैले वैकल्पिक मिडिया अझै बाँकी छ।
24 मई 2019 मा 15: 13
संयोगवश, म पनि सोचेको छ कि नियन्त्रित विरोध निश्चित हुन्छ। एक उदाहरण वेबसाइट हो - 'एन एन म9/ 11 एक बिट को बारे मा चर्चा को पालन गर्नुहोस। साइट सावधानीपूर्वक संदेह छ, तर एकदम स्पष्ट छ तर एक दिशा मा शंकास्पद। यो एक साँच्चै स्वतन्त्र विचारक को लागी शर्मिला प्रदर्शन हो।
तैपनि हामीले असलको शक्तिलाई कम गर्नु हुँदैन। जर्ज वैन हाउट्स जस्ता महत्वपूर्ण हस्तिहरु पनि छन्। मलाई थाहा छ कि यहाँ छलफल गरिएको छ कि त्यो पनि एक नियन्त्रण विरोध हुनेछ, तर मैले यसको कुनै प्रमाण फेला पारेन। उहाँ साँच्चै एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ जुन ज्ञात हुन्छ। जेरोन भ्यान कन्निंग्सबगज जस्तै। तिनीहरू अझै पनि भीडद्वारा हास्यास्पद छन्, तर तथ्य यो कि 'साजिश सिद्धान्त' खुल्ला रूपमा छलफल गर्दै छन्। प्राय: साना चरणहरूमा जान्छ।
24 मई 2019 मा 17: 58
म बुझ्दछु कि तपाई यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ र अन्य साइटहरूको लागि सानो स्पीच्छी विज्ञापन सधैं सहि छ, तर कृपया यहाँ साइटमा खोज फिल्ड प्रयोग गर्नुहोस् र अजबमा जर्ज वान हाउट्सलाई अनुमति दिनुहोस्।
1 जून 2019 मा 09: 07
विल्सन बोल्डविजिनले एक नयाँ गिरोह पत्ता लगाएको छ।
तिनीहरूले उनीहरूका प्रतीकहरू, बगदादको अपराध सिंडिकेटबाट सेतो ढोकाबारे कुरा गर्छन्
अहिलेसम्म, केवल एक सानो इन्टरनेशनल अखबारले यसको बारे केहि कुरा गरेको छ।
नकली वा वास्तविक? यसको लागि हेर्नुहोस्
1 जून 2019 मा 10: 28
तपाईं हेडलाइनहरू र आवाजहरूले बताउन सक्छन् कि तिनीहरू आफैलाई पनि थाहा छ कि उनीहरूले भर्खरै एउटा सिर्जना गरिएको कथा बोल्दैछन्।
अल सलाम हाहा कसरि उनि यसलाई बनाउछन
निस्सन्देह जन डे मोल!
1 जून 2019 मा 10: 33
त्यसोभए नक्कली समाचार किन?
खैर, किनकि त्यहाँ कानून बनाउन आवश्यक छ जुन क्लबलाई अझ सजिलैसँग रोक्न सक्छ।
कुलपति राज्यको सम्भावित संगठित विरोधको कुनै पनि फारम पहिले नै प्रतिबन्धित हुनुपर्दछ र त्यसैले तिनीहरू आफ्नै मोटरसाइकल ग्याङ्गेसनहरू सिर्जना गर्दछन्, जुन प्रतिबन्ध यस तरिकामा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।
आखिर, मान्छे एकपटक पत्ता लगाउन थाले कि उनी एक भयानक पुलिस अवस्थामा बाँच्न आए, उनीहरुले अब व्यवस्थित गर्न सक्दैनन् र प्रतिरोधको कुनै पनि प्रकारले दमन गर्न सजिलो छ।
यसको अतिरिक्त, यो बायाँ बनाम दाहिने बल फिल्ड ईन्धन गर्न प्रयोग गरिन्छ; यो पनि लागि सजिलो छ।
2 जून 2019 मा 18: 24
2 जून 2019 मा 21: 52
तपाईले भर्खरै खोज क्षेत्रमा '5G' प्रविष्ट गर्नुहुने साइटमा सबै नियन्त्रण विरोधी (सुरक्षा नेट) वार्ता सुन्नुको सट्टा। तिनीहरू केवल वास्तविक खतरा मास्क गर्न चाहन्छन् (यो 'दिमाग र डीएनए अनलाईन')
3 जून 2019 मा 11: 22
5G र AI को साथ, अन्य को बीच, उनि एक महान सम्झौता गर्न सक्षम छन्। यो डराउरो हुनेछ।
« यूरोपीय चुनाव र FvD सुरक्षा नेट ('आप्रवासनहरूको उदाहरणद्वारा रिलिज)
मिडिया एक घोटाला दिनुहोस्, एक राज्य सचिव (हर्बर्स) बलिदान: विश्वसनीयता मार्केटिंग »
कुल भ्रमण: 13.033.542
Riffian op टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह
Mireille भान डेन एन्क op इन्द्रेणीले कट्टरपन्थी धर्मको प्रतिनिधित्व गर्दछ जबकि समर्थकहरू सोच्दछन् कि उनीहरू 'विविधता र समावेशीकरण' को लागि संघर्ष गर्दैछन्।
मार्टिन भिजल्याण्ड op टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह
विश्लेषण गर्नुहोस् op टर्कीको आक्रामक सिरिया युरोपको लागि बन्दरगाह
1.650 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्